Miroborobo ny fizahantany any Litoania ary tian'ny mpitsidika alemanina izany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Miroborobo ny fizahantany any Litoania ary tian'ny mpitsidika alemanina izany
Febroary 24, 2019
Tian'ireo Alemanina ny mandeha any Litoania. Niteraka taona firaketana tamin'ny taona 2018 ho an'ny fizahan-tany any Litoania.
Olona 3,6 tapitrisa no nampiasa serivisy fampiantranoana farafahakeliny indray alina raha nandeha tany Litoania izy; Vahiny vahiny ny 1,7 tapitrisa amin'izy ireo. Fitomboana 11.3% izany raha oharina amin'ny 2017! Raha ny marina dia avo roa heny noho ny nambaran'ny Fikambanam-pirenena misahana ny fizahan-tany eran-tany ny isa.
Tamin'ny taon-dasa, ny vondrona vahiny vahiny lehibe indrindra dia tonga tany Litoania avy any Alemana. 214 100 izany olona izany na 21.6% mihoatra ny tamin'ny 2017. Ireto no isan'ireo vahiny alemanina lehibe indrindra eto Litoania hatramin'izay. Ny fitomboan'ny vahiny avy any Angletera dia niavaka ihany koa - ny isany dia nitombo 19.1%. Vahiny 6.9% hafa avy any Frantsa, Italia ary ireo firenena Skandinavianina no nahita an'i Litoania tamin'ny taona lasa.
Lithuania dia nandany vola tamin'ny famatsiam-bola tsy tapaka tao amin'ny firenena voafantina; ireo fitaovana sy fantsona voafantina dia nanaporofo fa tena nahomby tokoa. Tamin'ny taon-dasa, niarahaba vahiny 11.6% avy tany Etazonia izahay, 22.3% ny vahiny avy any Japon, 20.6% ny vahiny avy any Chine ary 27.3% ny vahiny avy any Israely.
Town Hall Square matetika no teboka fanombohana hahitana
Ny monasiteran'ny Pažaislis dia iray amin'ireo zavatra mahaliana indrindra an'i Kaunas, tian'ny mpandeha an-toerana sy ny vahiny avy any an-tany hafa. Sary avy amin'i A. Aleksandravičius.
Ny isa nomen'ny departemantan'ny statistikan'i litoanianina dia tsy misy ny fampiantranoana ny trano fandraisam-bahiny sy Airbnb. Voalaza mialoha fa, raha azo atao ny manangona, dia tokony ho eo ny isan'izy ireo. 30% lehibe kokoa.
Tamin'ny 2022, nanao daty tamin'i Eropa i Kaunas. Ny tanàna, voafidy ho ny renivohitry ny kolontsaina ny kaontinanta, androany dia vonona hiarahaba ny vahininy, hizara ny hevitry ny fiarahamonina ary hamorona atiny vaovao ho an'i Kaunas, Litoania, Eoropa. Ny Akademia kolontsaina Tempo misokatra, lahateny, fifanakalozan-kevitra, fampiratiana, fampisehoana ary fametrahana, ny angano ankehitriny an'i Kaunas ary ireo hevitra very saina indrindra izay natsangana ho amin'ny fiainana.
Ny alika dia mitondra fahatsapana fahasambarana sy fifaliana lehibe. Ny mpitsidika iray dia afaka mandeha mitsangantsangana mahafinaritra amin'ny alàlan'ny lalan'ny ala manodidina an'i Kernavė ao anaty sled iray nosarihan'ny huskies Alaskan namana.
Fanazavana bebe kokoa momba Lithuania.travel
Fanambarana navoaka taorian'ny fianjerana Boeing 767-300 nahafaty olona tany Houston
Lehilahy mitam-piadiana manandrana maka an-keriny ny fiaramanidina mifatotra any Dubai, mitifitra an-tsambo